Shiinaha soosaarida badeecada aluminiumka ah Soo saarida iyo Warshadda | Teng'an
Kala sooc alwaaxyada aluminium ee dhumucda kala duwan si loo hubiyo dhumuc isku mid ah alaabta ceeriin. Markaad u isticmaaleyso qalabka aluminium sida alaabta ceeriin, hubi in aysan jirin wax xabbo ah iyo cabbir isku mid ah.
Isticmaalka koollada budada aluminiumku waxay leedahay xaalad cayiman oo ku saabsan warshadaha qalabka dhismaha. Tayada wax soo saarkeenu waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo adeegsadayaasha ah, tayada wax soo saarkana waa la damaanad qaaday. Aan u soo bandhigo habka wax soo saarka ee koollada budada ah ee aluminium.
Marka la xakameynayo tayada alaabta ceyriinka ah waxay isticmaashaa haraaga aluminiumka sida walxaha ceyriinka ah, waa in la soo xulaa marka ugu horeysa, waxaa la soo saarayaa waraaqda oksaydhka ah, iyo aluminiumyada foornooyinka dhumucda kala duwan ayaa loo kala saaraa si loo hubiyo dhumucda isku mid ah ee alaabta ceeriin. Marka maadooyinka aluminium loo isticmaalo sida alaabta ceeriin, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in aysan jirin wax xabbo ah iyo cabbir isku mid ah.
Mashiinka kubbadda ayaa aluminiumka aluminium ee la xushay ama walxaha aluminiumka ah iyo xalka aqueous ee lagu daro waxyaabo kala duwan oo saliid ah ku ridaya milkiilaha kubbadda lagu shiido. Inta lagu jiro howlaha shiidi, heerkulka mashiinka waa in si adag loo xakameeyo. Haddii heerkulku aad u sarreeyo, waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo lagu qaboojiyo biyo. Sug ganaaxa maaddada Marka shuruudaha la buuxiyo, mashiinka waa la joojin doonaa. Gargaarka wax lagu shiido ee la isticmaalo ayaa ka dhigi kara habka wax lagu shiido kubbadda isaga oo aan kubbadda ku dhegin, oo budada iyo budaduna isma dhegi doonaan, si ay milkiilaha kubbadu si habsami leh ugu socoto. Budada biyaha ayaa si isku mid ah u kala firdhin kara budada aluminium ee ku jirta xalka biyaha, taas oo ku habboon in la shiido. Wakiilka daxalku wuxuu ka hortagi karaa budada aluminium inay kiimiko ahaan falcelin ku sameyso biyaha. Wakiilka dahaadhku wuxuu ka hor tagi karaa budada aluminium inay la xiriirto hawo isla markaana ay falcelin kula yeelato biyaha dhalada dhalada, taas oo ah, budada aluminiumku way duuduuban tahay. Saabuunta ayaa lagu dhaqaa oksaydhka ku jira dhalada dhalada. tayada wax soo saarka.
Ka dib marka la joojiyo mashiinka kubbada bixiya, isla markiiba ku dar dareeraha horay loo sii daayay ee mashiinka ku jira, bilow oo socod ilaa 3 ~ 5 daqiiqo, ka dhig mashiinka caajis iyo milan, isticmaal faakiyuum si aad ugu nuugto walxaha haanta ku meel gaarka ah. Ka dib u isticmaal 30 ~ 50kg oo biyo nadiif ah, Ku shubo waxyaabaha haray mashiinka, ka dibna u isticmaal faakiyuum si aad biyaha ugu dhuuqdid haanta ku meel gaarka ah.
Fuuqbax Sifee miiraha nuugida taangiga miiraha nuugista, ka dibna fur waalka dheecaanka haanta ku meel gaarka ah, oo dareeraha haanta geli taangiga miiraha nuugida. Taangigu markuu buuxo ka dib, xir waalka, bamka faakiyuumka pneumatic, fure waalka fuuqbaxa iyo waalka taangiga biyaha lagu keydiyo, Yey tahay in lagu nuugo haanta biyaha lagu keydiyo, si dib loogu warshadeeyo. Isugeynta shaandhada nuugista waa la siidayaa ka dib marka waxyaabaha adag ay u qalmaan, ka dibna lagu rakibo foosto.
Hore: Saameynta budada aluminium ku leedahay shubka hawada ku jira
Xiga: Mabda'a dalabka ee aluminiumka koollada budada ah ee la taaban karo
qalabka dhismaha aac
guryaha budada aluminium
budada aluminium ee loo isticmaalo aac block
Ku saabsan qalabka wax soo saarka